10 Tips To Save Money Nakuba Ukuhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Tips To Save Money Nakuba Ukuhamba
Ngubani na ungathanda ukulondoloza imali xa kunokwenzeka? Ukuhamba okungaba isenzo ezibizayo, kodwa uthenge itikiti lakho ngololiwe ne Gcina A kuqeqesha izicwangciso ngoncedo lwethu, uyakwazi yehlisa iindleko. Gcina imali xa uhamba nala 10 amacebiso iholide yakho elandelayo yamphako wakho aya kubulela kuwe.
Icebiso 1: Incwadi A Room Ne ifriji Microwave Okanye Kitchen Area
Nangona abanye abantu mhlawumbi ungathanda ukupheka xa ku iholide, ukutya isidlo nje enye ngosuku 'ekhaya' kungakongela emphandeni. Kutheni kuvuyiswa ikomityi yekofu elibheke indawo entsha ngaphandle Intlawulo yenkonzo igumbi crazy? Kunokuba badle-in kwasekuseni lesidlo sasemini ze splurge phezu isidlo fancy. A microwave kunye efrijini nazo ziya kuba luncedo ukuba ayaphola kulahlwe!
Icebiso 2: Ngaphambi You Book, Yiba Esazi Of The Indawo Of okokuba uhlala phi na
Zokuhamba ungengeza phezulu ngokukhawuleza, ngoko ungafuna ukuhlala kwindawo esembindini. lebhola indawo leyo kude ukuze kubonakale kubiza kodwa uya kuzidla uze ngokoqobo uhlawule kamva. Kungakuhle, ncwadi ethile unako ukuhamba yonke evela. Hayi nje wena ukubona ngaphezulu isixeko uqubha, kodwa uyakuthi kwakhona wonge imali xa useluhambeni.
Icebiso 3: Khangela Kuba City Tourism Cards To Save Money Nakuba Ukuhamba
Kuxhomekeka ikhadi, uyakwazi ukuzuza ezamahala okungena ezinika abatyeleli phezulu, izaphulelo e zokudlela yaye shops, ukutsiba-line-khetho e ephithizelayo iindawo ezinika umdla zotyelelo, zokuhamba free zomphakathi, kwaye nkqu ezincwadini free. Ixhomekeke kolwakho isicwangciso-hambo, oko kunokuba ibiza imali.
Icebiso 4: Musa Fumana The Room Best
Lingakanani ixesha ngokwenene uya kuchitha ngaphakathi egumbini lakho? Ngaba nawe nje balele khona? Ingaba ufuna igumbi umbono esihle okanye indawo kangaka? Ngaba uza usebenzise aluncedo, ezifana echibini okanye igumbi ukufanelekela? Makhe bathembeke, iiholide ayithethi ngokufumana ukufaneleka! Ngoko ke incwadi egumbini lakho smart ze wonge imali xa useluhambeni.
Icebiso 5: Chitha ixesha elingakumbi Iindawo ezimbalwa kwaye uya konga Money Nakuba Ukuhamba
Thina LOVE zokuhamba olucothayo. eneneni, ngokucokisekileyo ngakumbi ... siyayithanda zokuhamba olunentsingiselo. Kunokuba ezibaleka ukususela ekupheleni kwe lizwe kwenye, okanye ukudiliza nge 6 amazwe ku 6 iiveki, ukumazi lo mmandla wena ku, kuhle. Ukuthatha uloliwe yeyona ndlela ilungileyo yokwenza oku, njengokuba ixesha lokungenisa zonke iisayithi kunye nemifanekiso njengoko nihambe. Ngaphandle uvuyo yokuthatha kube lula, Ukwenziwa iindiza ezininzi kakhulu, uhambo ibhasi, kunye nokuhamba imigama emide ngaba ngokwenene ukutya zibe ibhajethi yakho. Ke inciphise, bathatha kakhulu, and discover all the cool free stuff.
Icebiso 6: Landela On Social Media
Gcina imali ngoxa ehamba "liking" oyithandayo ukuhamba zephondo ku Facebook kwaye "ulandele" kwi-Twitter. Oku kuya eqhelekileyo kakhulu kwiinkampani zohambo ukukhulula nezahlulo ezishushu ngqo ngokusebenzisa amajelo zabo zentlalo imidiya.
Icebiso 7: Iidili Newsletter
Thuma ubhalisele iincwadana ezimbalwa ukuba bavelise uluhlu zibe lwangoku ziyafumaneka kwi umnatha ngalo naliphi na ithuba lwexesha elinikiweyo. Nazi ukukhetha yethu ngoku ukuba zeendaba ukuba wonge imali xa useluhambeni:
Travel Zoo - Bhalisela yeendaba ngeveki FREE Top wabo 20 izahlulo - iintlelo kumazwe awahlukeneyo.
Yilwa Base -Bhalisela izilumkiso zentengiselwano yasimahla. Baye lijongene intengiso unadvertised yaye uthembisa ukuba uya kufumana naphi na.
Isikhululo senqwelomoya saseLyon ukuya koololiwe baseSt Moritz
Icebiso 8: Rent An Indlu
Iindawo zokuhlala yiBOMB kwiintsapho okanye abo babefuna nendawo extra kunye nekhitshi ukuze ugcine ku ukudla. Airbnb i a good way to get low-cost vacation rentals and sublets from locals in 180 amazwe.
Icebiso 9: Iindawo ezinika umdla In Season Low
Ukuba unayo akanaso kokukwazi ukuphepha iindawo isizini eliyincopho, ubambe it! Amaxabiso ukugxuma kakhulu ngethuba leeholide zesikolo. Kwaye ukuba akukho nje ihlobo kufuneka uphephe - musa ukulibala ukuba iPasika, Krisimesi kunye ezimbini ezinesiqingatha elide iiholide kufanelekile ukuba ibe ngaphezulu ezibizayo. Ukuhamba ngaphandle xesha uya kuthetha amatikiti etreyini ingabizi kunye neendawo ngaphantsi ndixakekile - imeko win-win ukugcina imali xa useluhambeni!
Isikhululo senqwelomoya saseLyon ukuya koololiwe baseProvence
Eyokugqibela: Funa Out Free WI-FI To Save Money Nakuba Ukuhamba
Fumana free WI-Fi Kwiilayibrari cafes, ngoko musani isando data yakho. Kwaye ukuba ukhe ubene ngokufowunela ekhaya ukuze ufumanise ukuba usafuna ukuna apho, musa ukulibala ukuba basebenzise iinkonzo ezamahala njenge Skype okanye Google!
Ngaba We Nceda Save Money Nakuba Ukuhamba?
Masazi ukuba wakunceda wonge imali xa uhamba nala 10 amacebiso. Singathanda ukwazi! Ngeli xesha, ndwendwela Ukugcina Ukuqeqesha ukufumana eyona uya kufumanisa kwi ukuqeqesha tickets. Akukho ntlawulo Efihliweyo, akukho engaka! Just Train Travel!
Ingaba ukulungele ngala 10 tips ukuba wonge imali xa useluhambeni? Book amatikiti etreyini yakho ngoku makhe ngokwakho utshayelwe ngobumnandi yokuhamba!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Tips To Save Money Nakuba Ukuhamba” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-save-money-traveling%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Uhlahlo lwabiwo-mali europetravel moneysavingtips Gcina imali tips uloliwe traveltips